Friday June 16, 2017 - 09:56:43 in Maqaallo by Shaqaalaha Burcoonline News
Markii Ibleys uu ka hinaasay Aadan ee uu diidey inuu u sujuudo dabadeedna naxariistii Eebbe laga xayuubiyey, dhaar wuxu ku maray inuu ilma Aadan weerar dhan
Markii Ibleys uu ka hinaasay Aadan ee uu diidey inuu u sujuudo dabadeedna naxariistii Eebbe laga xayuubiyey, dhaar wuxu ku maray inuu ilma Aadan weerar dhan walba ah uu ku soo qaadi doono. Weerarkii ugu horreeyey jannaduu kaga saaray lammaanihii caasi garrobey ee Aadan iyo Xaawa.
Murtidan quraanka ku xusan waxa ilaahay dadka inta caqliga leh ugu muujinayaa sida dhaqanka ibleysku dadkana ugu abuuran yahay sida collaytinka, hinaasaha, jidh diidka, u quudhiwaaga, islaweynida iyo qaar kaloo badan.
Muddo aan aad usii fogeyn bay ahayd markii madaxweyne Xaaji Ahmed Mohamed uu usoo bandhigay xubnaha dowladdiisa aragti ahayd inuu jeclaan lahaa inay u cimaamadaan Muuse Biixi oo codka golaha dhexe u hibeeyaan si uu madaxtimada dalka ugu tartamo balse waxa kaloo uu sheegay in qof waliba xor u yahay cidduu codka siinayo. Arrinkaasi wuxu dibadda soo dhigay gungumayaal, halaqyo iyo abeesooyin in badan madaxweyne Xaaji Ahmed uu dhabta ku haystey. Dhammaanteed kooxdaasi waxay isku raacday inay codsigii madaxweynaha diiddo islamarkaana ay is wada casilaan si dawladnimadu u wiiqanto. Kooxdan oo tiraddoodu badnayd waxa walaaleeyey hal qodob oo ah "colaadday u qabeen Muuse Biixi.” Anigu ammaanina maayo Muusi biixi dhaliilina maayo balse waxan ku dhaafayaa inuu yahay dhalad in la doorto geya.
Sir ma qabe allow sahanee Xaaji Ahmed dabinkii la maleegey wuxu kaga badbaadiyey dalka ilhaan xagga alle ka timi oo wuxu saq dhexe tusbaxa u rogey magacaabidda wasiirro iyo agaasimayaal cusub isagoo aad mooddo inuu ku luuqaynayo:
"Marka ay dibbootee
Nin hagraday ka dayrshee
Dugsi looga leexdaan
Daba geli aqaannaa
Markay ciinka daaqdaan
dabka ugu xiddigiyaa
Nin dumaala baan ahay
Degel fule ka barakacay
Nin ku diirsadaan ahay ” Xigasho: Maansadii Daalalley, Hadraawi
Akhristoow dib u milicso araarta aynnu qormada ku ballaysinnay. Dhuux dhaqannada shaydaanka iyo ibtilada uu aadmiga dhaxalsiiyo. Lama arko shaydaanka balse wuxu adeegsadaa Aadmiga qaarkii. Anigoon waxyaabaha qaarkood saafayn ee dusha ka saraya, waxay qaar ka mid ah kooxdii dowladda ka fallaagowdey wacad ku mareen, cadho iyo hinaase ay Muuse Biixi u qabaan awgeed, in wax kastoo ay ku qaadato ay weerar ku qaadayaan taageerayaasha Muuse. Ma xuma oo damacu dadkuun buu dhex yaallaa balse waxa arrintani dhalisay xaajo ugub oo ah in reeraha lakala jebiyo oo colaad iyo is nacayb uu tartan iyo xafiiltan aabbe u yahay la dhex dhigo. Tani waa dhaqanka ibleyska oo kala qaybinta iyo isku dirku hub u yahay. Qofku xisbiguu doonuu geli karaa balse kala jabka beel ama reer ku yimaaddaa waa burbur dalkoo dhan ku yimi.
Fallaagadani waxay adeegsatey dadka intii ugu mabda’a xumayd iyagoo hub iyo saanad uga dhigay shirar dadka isma hurtada ah laysakaga horkeenayo si loo wiiqo codkooda. Ilaahay wuxu quraankiisa ku yidhi "Wactasimuu bi xablillaahi jamiican walaa tafrraquu ------ ". Qofka u guntada kala firdhinta ummadeed ama beeleed si uu damiciisa ugu gaadho xisaabtiisu ilaahay bay ag taallaa.
Waxa igu maqaala ah ninkii caanka ahaa ee Michal Marian ama Maykal Maryama ee ree Somaliland u dhashay in berigii xornima doonkii markuu furtay xisbigii NUF uu beeshii guud ee uu ka dhashay ay qaybsantay oo qaybina tidhi xamar baanu qabanaynaa qola yaroo uu ka mid ahaana tidhi xamar dooni maynno. Maykal oo ahaa nin aad u fariid ah oo aad u il dheer ayaa go’aansaday inuu kooxdiisii ku qanciyo inay ka tanaasulaan aragtidoodii oo la taageero in xamar iyo koonfur la qabto oo uu markii hore kasoo hor jeedey dabadeedna waxa la wetdiiye sababta ku kelliftey taas waxaanu ku jawaabey hadal mahadha ah oo ahaa:
"Kala qaybsanaanta Reer waqooyi (Somaliland) waxa igaga weyn kala qaybsanaanta tolkay mana doonayo in beeshayda iyo tolkay burburo”
Nuxurka qoraalkan gaabani wuxu yahay " yaan siyaasad laga dhigan weerar lagu qaado beelaha qaar si loo kala daadiyo reeruhuna ha feejignaadeen oo hayska ilaaliyeen Shaydaanka siyaasadda ee loo igmaday kala firdhintooda. Dhiiggiinnaa la kicinayaa, xiniinyihiinnaa la shidayaa, Nin Nin kale la colloobey baa hub uu ku danaysto ka dhiganaya aayihiinna. Jifo iyo jilib hoose iyo xigaal hadhuubka mar wada cantuuga oo hiil iyo hooba wadaaga ayuu shaydaanku khilaaf iyo kala shaki ku soo dhex maguujinayaa.
Weligiin hakala tegina ee sida QUDHAANJADA is daba socda taasaa Sharaf ku yeelanaysaane.
Qalinkii: Cismaan Nuur Khaan